China Basketball Machine With Net Manufacturers, Suppliers, Factory - Buy & Wholesale Basketball Machine With Net - DKsportbot
Basketball Machine With Net
Qalabka Tababbarka Basketball ee Sirdoonka ah
Caddaynta Tijaabada: Qalabka Tababarka Kubadda Koleyga ee Sirdoonka ayaa dhiirigelin kara ciyaartoyga inta ugu badan, saameynta tababarka ee ciyaartooygu waa 30 jeer qaabab dhaqameedka tababarka.
Magaca: Mashiinka Kubadda Koleyga Sirdoonka
Hada tooska ah: 110V-220V (Ikhtiyaari)
Awoodda: 5 cutub
Awoodda Awoodda: 96W
Joogto: 2.3-6 Sec / ball
Miisaanka saafiga ah: 120KG
Meel yar oo bannaan ah kor u qaad inta aadan shabaqa kor u qaadin. Markaad shabaqa kor u qaadid, hagaajinta xagasha toosan, ka dibna aad geliso badhanka START, ka dib waxaad dooran kartaa noocyo badan oo tababaro ah.
Is-hagaajinta xawaaraha badan waxaa lagu heli karaa labada dhibic ee toogashada ah iyo Labada dhibic ee xakamaynta masaafada toogashada iyo dhererka toogashada Garabka tubta ubaxku wuxuu hagaajinayaa dhererka u adeega. Marka loo eego dhererkaaga ama shuruudaha tababarka, waxaad dooran kartaa qaabka aad jeceshahay si xor ah.
Dhererka ugu sareeya waa 2 mitir, dhererka ugu hooseeya ee adeega waa 1.2 mitir.
180 Darajo Go'an oo Go'an Oo U Dabaaraya
Ku tababbara xasilloonida qabashada, toogashada iyo xawaaraha dhaqaajinta jawaabta
Qalabka Basketball Bas toogashada dib u soo kabtay oo sameeyay durmado. Dib-u-habeeyahan durdurinta ayaa ka caawiya ciyaartoydu inay helaan tallaallo dheeraad ah waqti ka yar. Mashiinnada otomatiga leh ayaa dib ugu celiya kubbadda koleyga ciyaaryahanka waxaana loo diyaarin karaa inuu kubiirsado kubbadda koleyga meel kasta oo dhulka ah. Waxaa sidoo kale jira mashiinno toogasho guriga ah kuwanna dhab ahaan kuuma soo celinayaan kubbada laakiin waxay u isticmaalaan nidaam qaali ah si ay kuugu soo celiyaan kubbadda koleyga. Nooc kasta oo ka mid ah mashiinnada toogashada kubbadda koleyga ayaa kaa caawin kara inaad saddex jeer ka kacdo darbooyin badan halka makiinadaha otomaatig ah ay kaa caawin karaan inaad kacdo toban jeer intii aad qaadanayso tallaallo badan.
Dugsiyo sare iyo kulliyado badan ayaa leh mashiinada otomatiga ah sida caadiga ah waxaa lagu qiimeeyaa $ 2800 iyo kor. Waxa jira hal shirkadood oo waaweyn oo sameeya mashiinada toogashada kubbadda koleyga otomatiga ah - SIBOASI iyo DKSPORTBOT gudaha Shiinaha.
Waxaan nahay warshad ka socota Shiinaha, waxaan leenahay websaydhyada iibka alibaba, kaas oo hubin doona inaad hesho badeecado tayo wanaagsan leh oo ku siin doona laba sano oo damaanad ah. Waxaan sidoo kale u diri doonnaa farsamayaqaankeena si aan kuu siino adeegga dibedda haddii ay jiraan Dhibaatooyinka Iibka Ka dib.
Hot Tags: basketball machine with net, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, wholesale, in stock
Previous: China Made Basketball Machine Basketball Training Machine
Next: Factory Basketball Feeding Machine Basketball Playing Machine
High Quality Hoop Shooting Basketball Machine